Seminarrada 3D Istaraatiijiyad wanaagsan oo ah AutoDesk ee Spain - Geofumadas
Seminarada madaniga ah 3D istaraatijiyad wanaagsan oo ah AutoDesk ee Spain
Abriil, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS
Dhawaan, Txus wuxuu ku shaaciyay boggiisa, ugu yaraan kuwa lagu soo bandhigi doono Ser & Tec bisha May 14 ee Malaga iyo May 8 ee Valencia. Shirkadaha waaweyn ee loo yaqaan 'AutoDesk' ee dalka Spain ayaa soo bandhigi doona aqoon-isweydaarsiyo diiradda lagu saarayo maareynta dhulka iyo deeganka iyadoo loo marayo deegaanka '3D Civil'; Kuwani waa aqoon-isweydaarsiga:
Horumarinta Deegaanka leh Macaamiisha 3D MNC / Maareynta Dhulka
Barcelona 6 de Mayo (Semiconductors and Systems, SA)
Erandio 21 de Mayo (Semiconductor and Systems, SA)
Málaga 14 de Mayo (Xafiiska Adeegyada Bulshada)
Paterna, 15 de Mayo (APLICAD, Barnaamijyada CAD, CAM iyo GIS, SL)
Sevilla, 15 de Mayo (CAD & LAN, SA)
Madrid, 16 de Mayo (CAD & LAN, SA)
Vigo, 29 ee May (Asidek, SL)
Asua / Erandio 22 de Mayo (Sasidek, SL)
Sant Just Devern, 17 de Abril (CAD & LAN, SA)
Isdhexgalka mashruuca 3D munaasabadda Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed
Málaga, 14 de Mayo (Servitec Sercicios Informáticos, SL)
Inkasta oo hab qaadataa particularity ku xiran tahay shirkadda asal ahaan doonayaa inuu horumariyo ka AutoDesk AutoCAD Civil 3D iman kara, iyo in ay dhacdo Servitec, waxaa sidoo kale ka mid ah awoodaha maaraysay Map3D, kuwaas oo hadda waa isku dhafan ee xirmo isku. Waxqabadyadani waa:
Isbedelka xogta laga qaaday berrinka ee macluumaadka AutoCAD:
Soo dejinta si toos ah macluumaadka topoowga.
Nalalka otomaatiga ah ee curyaaminta iyo wareegyada xaglaha ee 2D iyo 3D.
Falanqaynta Qulqulka iyo falanqaynta dusha sare.
Cusbooneysiin sax ah oo MDT ah.
Falanqaynta goobaha kala duwan,
Abuuritaanka otomaatikada ee mudnaanta dheer, dhererka iyo mawaaqifrada.
Editing iyo cusbooneysiinta si toos ah ee profiles iyo guitars.
Daraasad beddelaad ah iyo doorashada ugu habboon.
Xisaabinta dhulka iyo dhoobada:
Xisaabinta si taxadar leh oo loo gooyo oo la buuxiyo.
Cusbooneysiinta si toos ah ee sharaxaadda iyo mugga.
Barashada astaamo kala duwan oo ka mid ah jaantusyada dhulalka ku habboon waddada wadooyinka, foorari, heerarka magaalooyinka, .etc.
Inta ugu sarreysa, waa bilaash. :), halkan waxaad ka arki kartaa faahfaahinta buuxda ee koorsooyinka iyo foomamka si aad u dalbato.
AutoDesk blog 3D
Post Previous«Previous Khariidadaha Google, oo leh khadadka casriga
Post Next Maxaan hadda samaynayaa?Next »
4 Jawaab "Seminar Bulshada 3D Istaraatiijiyad wanaagsan oo ah" AutoDesk ee Spain "
Jose isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u mahadcelinayaa qof ka qaybgalay siminaarada si uu iiga dhaafo warbixinnada aad u mahadceliseen
jcpescotosb isagu wuxuu leeyahay:
g! ama qof, waxaan ka shaqeynayaa sawirka jidka, marwalba waa la sameeyaa saldhigga guud laakiin iminka waxaan keenay xogta gaadiidka iyo heerarka (cutubyada) qofna ma yaqaano sida loo rogo xogta UTM? Waxaan leenahay xariijin la qeexay oo akhrinta qaybaha waa masaafo dheer oo dhaaftay + ama -, xariiqda dhexe, fogaanta dhererka saxda ah + ama - haddii qof uu i caawiyo jcpescotosb@hotmail.com
Abriil, 2008 at
waad ku mahadsantahay hagaajinta, waxaanan rajeynayaa in wax waliba ay wanaagsanaan ...
beddel isagu wuxuu leeyahay:
Dhawaan, Txus wuxuu ku shaaciyay bartiisa, ugu yaraan kuwa Ser & Tec ay gudbin doonaan bisha May 8 ee Malaga iyo May 14 ee Valencia ……… .Tirayaasha ayaa khaldan farqadaan. Iyagu waa 8 ee Meey ee Valencia iyo 14 ee May ee Malaga… 😉
Xaqiiqada weyn ee aqoon-isweydaarsigu waa inay muujiso awoodaha 3D ee ku saabsan maaraynta qaababka dijitaalka ah iyo dhulalka guud ahaan, laakiin ugu muhiimsan oo soo jiidasho leh, ka sokow tan, awoodda loo leeyahay in lagu dhejiyo dhammaan naqshadaynta 3D madani ah macluumaadka loogu talagalay GIS iyada oo loo marayo MAP.
U janjeedha Maamulka waa inay noqotaa codsi ah in dhammaan mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha la soo helo oo ay weheliso xogta mashruuca qaab "GIS", sidaa darteed muhiimadda ay leedahay in isla codsigan uu u maareeyo xogtaas iyadoo ay ku dambayso maqnaanshaha. macluumaadka iyo hagaajinta sheyga ugu dambeeya.
By habka ... ... seminar ee Malaga waxaan la siin doonaa lammaane